Jona 11, 2018 Admin
2 fiara fitateram-bahoaka orinasa lehibe any Brezila mahazo ny Bitcoin
Fiara fitateram-bahoaka roa orinasa Breziliana, Traffic Garcia sy Atsimo Brezila, izay tafiditra ao anatin'ny vondrona GSB vao lasa ny voalohany orinasa fitaterana mpandeha any Brezila mba hanaiky cryptocurrency ho toy ny fomba fandoavam-bola.
Ny vondrona voalohany ihany no nisafidy ny hampiasa Bitcoin, fa mikasa ny hametraka Litecoin avy Jolay.
"Maro ny asa ara-toekarena sy ara-barotra ireo nifindra monina ho any amin'ny tontolo nomerika, ary ny ampahany amin'ny lalana fitaterana mpandeha tsy hafa ", hoy ny filoha lefitry GSB Group Estefano Boiko Junior.
Ireo orinasa fitaterana manolotra nivezivezy teo tanàna koa ho an'ny sekoly tsy miankina nivezivezy, fikambanana, orinasa sy fitsangantsanganana.
Fomba fandoavam-bola vaovao tsy ampy amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka orinasa tranonkala, -tserasera amin'ny alalan'ny famandrihana ihany, ary ny tapakila dia halefa ho any amin'ny mpanjifa ny mailaka toy ny fandoavam-bola ny fandraisana ho mpikambana.
500 000 ny olona any Soisa nifidy ny rafitra ara-bola toy ny Bitcoin
Nisy fanentanana ho tanteraka Soisa manilika ny orinasa ara-bola ho zavatra mitovy ny rafitra ara-toekarena Bitcoin very mahavariana omaly - dia niezaka ny handresy efa ho 500,000 vato, manodidina 25% ireo nadinadinina.
Ny mampiady hevitra drafitra - fantatra amin'ny anarana hoe ny vola Fara Tampony Initiative - dia ho nahita banky ara-barotra avy elektronika famoronana nahazo vola rehefa mampisambotra mihoatra noho ny mipetraka.
“Cryptocurrency sy ny blockchain tsy mitovy izay loha hevitra ianao. Mety nampiasaina eo ambany ny rafitra manolotra izahay,” hoy Emma Dawnay, mpikambana ao amin'ny biraom-Momo, izay nanolo-kevitra ny vondrona Money Fara Tampony Initiative.
Mitohy Digital Sandam-bola mahazatra amin'ny DasCoin
Blockchain cryptocurrency DasCoin has released a short film detailing the inspiration for the project from the viewpoint of Michael Mathias, founder and PDG of DasCoin. This is the first in a planned series of films that will explore the DasCoin blockchain ecosystem and the people who created it.
$233M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Previous Post:Mihevitra Alemana fahatelo rehetra cryptocurrencies toy ny fampiasam-bola
Trevor Moede hoy i:
Jona 19, 2018 amin'ny 5:26 PM
Septambra 4, 2018 amin'ny 2:10 AM
letak hoy i:
Septambra 4, 2018 amin'ny 5:05 PM
Septambra 5, 2018 amin'ny 1:46 AM